Efa mandray andraikitra… ailika lava | NewsMada
Efa mandray andraikitra… ailika lava
Telo taona mahery izay ny fitondrana. Tapitra ny fotoana famindram-po hoe avela hiasa, aza tsikeraina. Inona ny vita? Iaraha-mahita, na tsy hita ihany koa: misy ve, ohatra, ny fiovana ifotony? Mba tena misitraka fihatsaram-piainana ve ny isan-tokantrano, na milofo amin’ny fitadiavana toy inona aza.
Mahalala sy mitsara izay iainany isan’andro ny vahoaka: fidangan’ny vidim-piainana, tsy fandriampahalemana, tsy fanjarian-tsakafo… Manampy trotraka ny fahavoazana noho ny rivodoza. Inona no afitsoky ny mpitondra? Toa tsy araka ny hetahetam-bahoaka, tsy araka izay tokony ho laharam-pahamehana…
Tsy misy mahavita ny vitany, hono, hatramin’izay tao anatin’ny 50 taona mahery. Sao tsy mifankahazo ny resaka? Tsy mbola misy izao fahantrana lalina sy maharitra iainan’ny vahoaka izao tokoa hatramin’ny niverenan’ny Fahaleovantena, na tao anatin’ireny fihetseham-bahoaka ireny aza.
Tsy takona afenina ny raharaha amin’izao fahoriam-bahoaka izao, na eo aza ny tsy fiaikena ho diso, fitavozavozana, fitsapatsapana lava… Fialana amin’ny tsy fahombiazana indray izao ny hoe tsy moramora, hono, ny manao zavatra. Navela na odian-tsy hita ho azy ny hoe tsy misy nahavita ny vitan’ny tena hatramin’izay.
Miara-dalana amin’izany ny fangatahana andro lava, fa tsy vita indray andro, hono, ny fanarenam-pirenena sy ny asa fampandrosoana. Fanamarinan-tena fa tsy mety ho diso amin’izay atao sy lazaina? Na fitetehana sy fampandriana adrisa hahazoana ny fe-potoam-piasana manaraka… Eo ny vahoaka mitsara.
Nefa nony tsy azo amin’izany ny vahoaka, fa miharihary loatra ny tsy fahombiazan’ny mpitondra fanjakana amin’itsy sy iroa tsy azo ialana: fitsaram-bahoaka mirongatra, fidangan’ny vidim-piainana tsy voafehy… Ailika amin’ny hoe samy tomponandraikitra ny rehetra indray ny raharaha, fa tsy manaiky ho diso.
Ho tonga hatraiza izao fanilihana andraikitra lava izao, ny tsy fiaikena ho diso… Mbola to teny ve ny toy izany: inoana ho marina izay lazainy ary hotanterahiny? Na hisy famindram-po ihany amin’ny fanohizana ny efa hita sy iainana izao…